Mpanamboatra sy mpamatsy marbra voajanahary China Montary
1.Application: Lakozia trano, trano fisakafoanana, hotely, toeram-pivarotana lehibe, foibe ara-barotra, tetik'asa, injeniera, sns.
2.Factory:Manana ny tsipika famokarana mandroso indrindra izahay sy ireo mpanao lamba za-draharaha indrindra; Azontsika atao ny mahafeno ny takinao manokana momba ny habe na ny volonao amin'ny takelaka sy ny takiana famolavolana manokana amin'ny vokatra vita miaraka amin'ny milina fanoratana CNC.
Material: Vato voajanahary
Certification: Tatitra momba ny CE / SGS / Fitsapana
1. Fampiharana: lakozia an-trano, trano fisakafoanana, hotely, toeram-pivarotana lehibe, foibe fivarotana, tetikasa, injeniera, sns.
2. Factory: Manana ny tsipika famokarana mandroso indrindra izahay sy ireo mpanamboatra lamba za-draharaha indrindra; Azontsika atao ny mahafeno ny takinao manokana momba ny habe na ny volonao amin'ny takelaka sy ny takiana famolavolana manokana amin'ny vokatra vita miaraka amin'ny milina fanoratana CNC.
Products latabatra an-dakozia marbra
Application / fampiasana lakozia
Size antsipirihany Hita amin'ny habe samihafa amin'ny vokatra samihafa
(1) Haben'ny Countertops: 96 "x26", 108 "x26", 96 "x36", na habe namboarina, sns.
(2) Hateviny: 20 MM na 30mm
(3) Misy famaritana namboarina ihany koa;
Famaranana ambonin'ny voalambolambo
Package (1) Vato hazo matanjaka azo zahana rano;
(2) Azo alaina amin'ny takiana namboarina namboarina;
Ireo fonosana rehetra etsy ambony dia hosoratana ho an'ny kaomandy fanondranana;
Material Marbra voajanahary
hateviny 18 mm
Applications Vanity Top, Top Counter an-dakozia, Top latabatra sy fanaka sns
Drafitra teknika Manamboatra tampon-vato miaraka amin'ny marbra voajanahary isika, manapaka ny masinina ary avy eo nohosoran'ny mpiasa mahay sy za-draharaha.
Fampiharana sy fampiasana Efitra fisakafoana, efitrano fandraisam-bahiny, hotely, villa, fampiasana an-trano
Package Vata hazo miaraka amina fonosana
Fomba fandoavana T / T, L / C
Ora nanomezana Miaraka amin'ny 15 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko
Safidy farany Noraina, orona omby antsasaky ny orona, orona omby feno, beveled, 1/4 boribory, beveled voasarimakirana, 1/4 laminate, boribory indroa sns.
1. Orinasa mpivarotra na orinasa ve ianao? Izahay dia orinasa, izay afaka manome anao ny kalitao avo kokoa amin'ny vidiny mirary.
2. Inona avy ireo olana mety hitranga amin'ny fizotry ny fametrahana azy? Ny vato voajanahary dia manana kalitao marefo, azafady ampahatsiahivo ny mpiasa mba hikarakara moramora amin'ny fizotrany fametrahana, manome sosokevitra anao izahay mba hanafatra toradroa vitsivitsy kokoa mba hiomanana amin'ny andro orana. Ary koa, azo antoka ny vokatray rehetra, ny fivarotanay dia handamina ny antony ary hahazo onitra tokoa ianao.
3. Afaka mahazo santionany maimaimpoana ve aho? Eny, misy santionany maimaim-poana. Saingy mila mandoa ny sarany ianao.
4.Afaka mamokatra vokatra avy amin'ny volavolainay ve aho? Eny, manao OEM sy OBM izahay.
Previous: VATO SINTERED
Manaraka: latabatra lakozia fitaratra nano
Takelaka marbra mainty voajanahary
Vato marbra voajanahary